Shirka Golaha Dhexe ee KULMIYE oo si rasmi ah loo soo gebagebeeyey | Somaliland.Org
August 26, 2008	Burco (Somaliland.org) – Shirka Golaha Dhexe ee Xisbiga KULMIYE ee ka socdey muddada Afarta maalmood ah Hotelka Plaza ee magaalada Burco ayaa si rasmi ah loo soo gebagebeeyey, kadib markii uu maanta doortay musharraxiinta xisbiga ee Madaxweynaha iyo Madaxweynekuxigeenka, isla markaana uu ansixiyey xubnaha Guddida Fulinta oo qayb ka mid ah hoggaanka xisbigu soo gudbiyey.
Guddida Fulinta ee xisbiga KULMIYE oo tiradiisu dhan tahay 35 xubnood, isla markaana 29 ka mid ah la magacaabay, lana soo hordhigay Shirka Golaha Dhexe waxaa ka mid ah labadii musharrax-Madaxweynekuxigeen ee ka cadhooday shirka iyo xubno ka mid ah taageerayaashooda. Magacyada guddida fulinta iyo xilalkoodana goor dhow ayaa la baahin doonaa
Gebagebadii shirka waxa hadal ka jeediyey Guddoomiyaha Xisbiga, mudane Axmed Maxamed Siilaanyo iyo Musharaxa M/weynekuxigeenka, Cabdiraxmaan Saylici waxayna uga hambalyeeyeen xubnaha Golaha Dhexe sida ay kalsoonida iyo codka ugu doorteen.
Guddoomiyaha Xisbiga, Axmed Siilaanyo, waxa uu ka hadlay xubnaha ka cadhooday shirka ee Ca bdiraxmaan Aw Cali Faarax iyo Axmed X. Cali Cadami, waxana uu u soo jeediyey Golaha Dhexe in wadajir looga hawlgalo sidii looga dabategi lahaa xubnahaas ka baxay madasha, isaga oo sheegay in dimuqraadiyaddu ay leedahay isjiid-jiidasho, balse, aan lagu kala tegin.
Khudbaddaha musharraxiinta iyo xubnaha guddida fulinta loo magacaabay goor dhow baan halkan idiinku soo gudbin doonaa.